Akhriso:NISA oo Muqdisho ku dishay 12 Saraakaal oo Ka Tirsan Al-Shabaab – Gedo Times
Akhriso:NISA oo Muqdisho ku dishay 12 Saraakaal oo Ka Tirsan Al-Shabaab
2nd December 2021 admin Wararka Maanta 0
Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa shaaciyay in howlgal qorsheysan oo habeenimadii xalay ka dhacay Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ku dileen 12 Sarkaal oo ka tirsan argagixisada Al-shabaab.
Qoraal kooban oo hey’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ay ku baahisay barteeda Twitterka ayaa lagu shaaciyey in 12 xubnood oo ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab ay xalay Muqdisho ku dileen ciidamada ammaanka.
“Howlgal gaar ah ayaa xalay lagu beegsaday 15 sargaal oo Maafiyada Alshabaab u qaabilsanaa khalkhal-gelinta Amniga Caasimadda Muqdisho. Waxaana ku dhintay 12 kamid ah Argagixisada. Waa waajib qaran ilaalinta amniga iyo bedbaada umadda Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri qoraalka NISA
Cumar Cabdirishiid oo Muqdisho kusoo dhaweeyeen midowga Musharaxiinta